The Giant's Causeway, ihe ịtụnanya eke na Ireland | Akụkọ Njem
The Giant's Causeway, bụ ihe ịtụnanya sitere n'okike na Ireland
Mariela Carril | | Ireland, Ihe ị ga-ahụ
Anyị kwuru ụbọchị ole na ole gara aga na Ireland nwere ọmarịcha obodo na taa anyị nwere ọzọ nke ndị a njem nleta postkaadị na-adọta ndị ọbịa: nke Refeyim Causeway. Ma na oge a abụghị na Republic of Ireland ma na North Ireland, akụkụ nke agwaetiti ahụ ka UK na-achịkwa.
The Irish n'ụsọ oké osimiri na-aga n'ihu na-enye anyị nrọ na nkume na mmiri na nke ahụ bụ Giant's Causeway ma ọ bụ Nnukwu ụzọ, ụdị aha ya na Bekee. Ọ bụ ebe mara mma ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga Emerald Isle, ị nweghị ike ịkwụsị ịmata ya.
1 Ihe Ndị Giants ahụ
2 Otu esi aga Giant’s Causeway
3 Gaa na Nnukwu ụzọ
Ihe Ndị Giants ahụ
Ọ dị na nke ugbu a ọchịchị antrim ma dịka ndị ọkà mmụta banyere mbara ala siri malite ya 50 na 60 nde afọ gara aga n'oge Oge Paleocene. N'oge ahụ enwere ọrụ mgbawa na ebe a bụ mmalite nke nkume: mmiri nke basal a wụrụ awụ wụsara site na mbara ala nke dị nro, ọcha, nzu dị ka okwute ma wuo ọtụtụ lava. Lava ahụ jụrụ oyi ma bute ya ma tiwaa ma dị ka mgbe apịtị kpọrọ nkụ ma gbajie.
Otú a ka amụrụ ụdị ahụ kehoraizin ogidi na nsọtụ convex n'okpuru na concave n'elu nke ahụ na-adọrọ adọrọ. O doro anya na ọkpụrụkpụ nke ogidi ndị ahụ metụtara ọsọ nke lava ahụ jụrụ. Ọ ka mma ịmara ihe niile a tupu ịkwụsị ma ọ bụ jee ije na ha, yabụ anyị ga-enwe ekele maka ha.
Otu esi aga Giant’s Causeway
You nwere ike nweta n'ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ ala. Ma Calzada na Center Visitor ugbu a dị n'okporo ụzọ B147, dị nnọọ kilomita atọ site na obodo Bushmills, Kilomita 11 site na Coleraine na 12 si Ballycastle. E nwere ebe a na-adọba ụgbọala ka ị nwee ike ịhapụ ụgbọ ala gị.
Ọzọkwa, n’etiti Calzada na Bushmills enwere ọrụ ụgbọ ala na n’agbata Machị na Ọktọba na-arụ ọrụ oge niile ma na-ewe naanị nkeji 20. Ọ bụrụ na ị ga-ahọrọ ndị tren I kwesiri ima na inwere ike iwere ya na Belfast ma obu Londonderry mana ikwesiri ighapu na Coleraine wee banye na bọs (Ulsterbus Service 172). Ọ bụrụ na nke gị bụ hiking ma ọ bụ ịnyịnya ígwè enwekwara ụzọ dị ukwuu ịme.
La Causeway Coast .zọ, dịka ọmụmaatụ, njem kilomita nke oke osimiri mara mma.
Gaa na Nnukwu ụzọ
Ugbu a ụgwọ bụ 10 kwa okenye (ọnụahịa n'ịntanetị). Ọkọlọtọ price e nwere £ 11 ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta a bit ịzụ ahịa n'ịntanetị ka mma. Ebe a ga - emepe na Jenụwarị site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede, Febụwarị na Machị ga - emechi otu awa mgbe e mesịrị, Eprel, May na June na 5 pm, July na August na 7 pm, Septemba mechiri ọzọ na 9 pm, October na-emechi na 7 pm na November na December na-emechi na 6 pm.
Tiketi ahụ na-eme ka ị nweta ohere ịbanye na Center Visitor, ojiji nke ndu ọdịyo dị na mpụga na mpempe akwụkwọ nghazi, mana ụgbọ ala dị n'etiti Center Visitor na Causeway n'onwe ya nwere ụgwọ ọzọ. Otú ọ dị, e nwere ụzọ abụọ ịgakwuru n'ụsọ oké osimiri na nnukwu ụzọ ya: otu dị kpọmkwem site n'okporo ụzọ na onye ọzọ bụ ụkwụ.
Site n'okporo ụzọ, ebe bọs ahụ hapụrụ gị, ọ ga-erughị otu kilomita ma ọ bụrụ na ịnweghị ije okirikiri nke na-eso ụzọ nke ugwu Nzọụkwụ Onye Ọzụzụ Atụrụ ma laghachi n'okporo ụzọ nke dị kilomita atọ n'ogologo.
Kaadị a ma ama kachasị mma, mgbidi nke ogidi ndị dị ka ọkpọkọ nke akụkụ, bụ nke a maara nke ọma dị ka Organ, ha rutere n'ụzọ dị ala nke a na-esi n'okporo ụzọ n'onwe ya na nke Onye Ọzụzụ Atụrụ. N'ime ụzọ a ị ga-ahụ Anya nke Nnukwu, okirikiri oghere ndị na-acha uhie uhie nke e ji ígwè mee na nkume. Zọ ahụ dị warara ma na-agba kilomita atọ na ọkara.
E nwekwara oku Egwuregwu Runkerry, ụzọ nke na-esote ụzọ ahụ n’elu ugwu ahụ, gafere Causeway Hotel na Runkerry House. Ihe ngosi dị oke mma, ị na-ahụ Donegal na ọbụlagodi Portrush, na ịlaghachi azụ ga-atụba gị n'ọnụ ụzọ Visitor Center. A na-ebu ụzọ ụzọ ahụ ma emesịa ejiri ahịhịa ma ọ bụ unyi mee ya ma na-eme njem ihe dị ka kilomita 4.
La Dunseverick Castle nzọ ụkwụ Ọ bụ ọzọ nke enwere ike ịgagharị ebe a. Na-ewere ya na njedebe nke obere ebe a na-adọba ụgbọala na-esote nnukwu ebe ndị ọbịa na-adọba ụgbọala. N’ebe a Okporo ụzọ Causeway Coast na-eso ụzọ okporo ụzọ ochie nke gbagoro ruo 1949. routezọ ahụ gafere akwa mmiri wee rịa ugwu ahụ gaa Portballintrae nke ngụkọta nke kilomita abụọ.
N'ikpeazụ enwere Portallintrae ochie tram nzọ ụkwụ n’onwe ya otu n’ime ụzọ dịkarịsịrị ogologo nke elu ugwu. Ọ dị warara ma na-amị amị mana echiche ndị ọ na-enye kwesịrị ka a hụ. Ọ bịarutere na Castle Dunseverick wee tụda gị n'ụkwụ ụlọ ọbịa. Na ngụkọta ihe fọrọ nke nta 13 kilomita. Ndị a bụ njem niile mpaghara mmiri Giant's Causeway na-enye.
Ihe dị mkpa, n'agbanyeghị ụzọ ị họọrọ ịga, bụ na ị kwụsịghị ịma nke ahụ Rockdị okwute ndị ama ama: Harp, Organ, Hump na Camimy Stacks.
Maka akụkụ ya Ogige ndị nleta bụ obi nke ogige ahụ: ihe owuwu nke mgbidi iko na ogidi basalt, nke oriri oma na imewe nke oge a. Enwere ọtụtụ ụlọ ngosi n'ime na site n'elu ụlọ, nke ahịhịa jupụtara, ị nwere 360ºle nke Nnukwu ụzọ.
Ọ bụ ebe ị ga-anụ ma eziokwu ma akụkọ ifo nke okporo ụzọ a: eziokwu banyere ala na akụkọ ifo banyere ndị dike abụọ ahụ: ọ dị mma Finn MacCool na Benandonner, agbata obi gi ojoo si scotland. Otu ụbọchị dị mma ha kpebiri iwu okporo ụzọ nke gafere oke osimiri iji zute ma tụọ ikike.
Finn mere nke ya mana o siri ike nke na ụra buru ya. Nwunye ya chọtara ya mana tupu ọ teta n'ụra, ọ nụrụ ka Benandonner bịarutere wee hụ ya nnukwu ka o zoo di ya n'azụ akwa na okpu. Onye Scotsman kpọrọ ya mana nwunye ahụ, onye maara ihe nke ukwuu, gwara ya ka ọ belata olu ya ma ọ bụ na ọ ga-eteta nwa ụra. N'ihi ya, Benandonner chere na ọ bụrụ na nwa ahụ buru ibu, nna ahụ ga-abụrịrị nnukwu mmadụ ... Gini ka o mere? N'ihi na ọ laghachiri na Scotland wee bibie ụzọ na-eso ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » The Giant's Causeway, bụ ihe ịtụnanya sitere n'okike na Ireland
Gaa na Obodo Enchanted nke Cuenca